TubeMogul: Famolavolana doka horonantsary nomerika sy fividianana fantsona manerana ny fantsona | Martech Zone
Talata, Novambra 8, 2016 Douglas Karr
eMarketer dia naminavina ny fahabangan'ny tetibola amin'ny fandaniana amin'ny doka dia 88% TV, horonan-tsary nomerika 7% ary 5% ho an'ny horonantsary finday. Miaraka amin'ny fijerena horonantsary faharoa sy horonan-tsary finday miakatra haingana dia haingana, TubeMogul dia nahita fa ny fahazoana ny paikady miampita fantsona dia afaka mampitombo ny fahatsiarovan-tena sy mampihena ny vidin'ny doka isaky ny mpijery.
Raha ny marina, tao amin'ny fanadihadiana tranga iray an'ny Hotels.com, dia hitan'i TubeMogul fa mNy fahatsiarovana essage dia 190% lehibe kokoa ho an'ireo izay nahita ny doka tamin'ny fahitalavitra ihany ary 209% lehibe kokoa ho an'ny Internet raha oharina amin'ireo izay tsy nahita doka mihitsy. Ny fahatsiarovana mafy indrindra kosa dia ho an'ireo izay nahita ny doka tamin'ny efijery roa. Ireo mpijery izay nahita ny doka tamin'ny fahitalavitra sy an-tserasera dia nahatadidy izany 39% na 255% lehibe kokoa noho ireo tsy nahita doka.
Ny olana, mazava ho azy, dia ny fomba ahafahan'ny mpivarotra mikasa amin'ny seho amin'ny dokambarotra horonantsarin'izy ireo. Tubemogul dia manova ny drafitra avy amina dingana tsy fahita firy sy sarotra amin'ny alàlan'ny fitaovana mavitrika ahafahan'ny mpivarotra miditra foana. Ny fampiasana rindrambaiko dia manome ny fahalalahan'ny mpanao dokambarotra hamorona drafitra maro mandritra ny taona ary hanitsy ny drafitra rehefa miova ny paikady. TubeMogul ahafahan'ny mpanao dokam-barotra manomana, mividy, mandrefy ary manatsara ny dokam-barotra amin'ny horonantsary, anisan'izany ny:
Doka amin'ny horonan-tsary nomerika - Ny lisitra in-stream sy in-banner, ny endrika mahazatra sy ny interactive mialoha ny horonan-tsary no mahazatra indrindra amin'ny dokambarotra horonantsary nomerika.
Doka amin'ny finday - dokam-barotra amin'ny finday ho an'ny bandwidth video mitombo.
Doka amin'ny haino aman-jery sosialy - TubeMogul dia iray amin'ireo sehatra fividianana horonantsary voalohany tafiditra ao amin'ny Facebook API. Azonao atao izao ny mampiditra ny dokam-barotra amin'ny horonantsary amin'ny Facebook sy Instagram miaraka amin'ny fahitalavitra an-tsary, horonan-tsary nomerika ary fampisehoana doka.
Fandaharana amin'ny fahitalavitra fandaharana - Amin'ny alàlan'ny fandefasana automatique ny fizotry ny fividianana doka amin'ny fahitalavitra, ny vahaolana Programmatic TV (PTV) anao dia ahafahanao mividy doka fahita amin'ny alàlan'ny rindrambaiko, manome anao fidirana amin'ny lisitra sy ny mpihaino tsy misy amin'ny alàlan'ny fomba nentim-paharazana mividy doka amin'ny fahitalavitra.
TubeMogul dia manolotra lisitra premium ary koa toeram-pivarotana RTB, mikendry ny mpihaino amin'ny alàlan'ny fahitana ny demografika, ny jeografika, ny fitondran-tena sy ny toe-java-misy, ny tatitra momba ny fanamarinana doka, ary ny fitaovana fandefasana asa ho fanatanterahana sy fanatsarana.
TubeMoguls koa dia nomena anarana a mpitarika eo amin'ny sehatra fanaovana dokambarotra momba ny fangatahana horonantsary ao amin'ny The Forrester Wave ™. Izy ireo koa dia manolotra fandaharam-pianarana fiofanana feno sy programa fanamarinana ho an'ireo mpivarotra marika TubeMogul Academy.
Sintomy ny Taratasy Fotsy an'ny TubeMogul momba ny drafitry ny tabilao hazo fijaliana
TubeMogul dia misy amin'ny marika sy masoivoho.
Tags: dokambarotra horonantsary nomerikaonja forresterdokambarotra horonantsary manerantanydokam-barotra amin'ny horonantsary iraisam-pirenenadoka amin'ny findaydokam-barotra amin'ny programa fandaharanadokam-barotra amin'ny horonantsary sosialydoka amin'ny fahita lavitratubemoguldokam-barotra amin'ny fahitalavitradokam-barotra amin'ny horonan-tsarySehatra fanaovana fangatahana an-dahatsoratry ny horonantsary